Waa maxay sababta qoraalka Comic Sans sidaas loogu nacay | Abuurista khadka tooska ah
Waa maxay sababta qoraalka Comic Sans sidaas loogu nacay?
Jorge Neira | | Fuentes, Khayraadka
Si la mid ah sida Helvetica ay uga mid noqotay noocyada kala duwan ee muranku ka taagan yahay waxaana mahad oo dhan iska leh difaacayaasheeda iyo dhagar qabayaasheeda; Comic Sans wuxuu noqday mid ka mid ah typefaces-yada ugu neceb adduunka naqshadeynta garaafka
Aad ayey u badan tahay oo ay suurtagal tahay in la yiraahdo nacaybka noocan ah waa qayb ka mid ah isla xirfadda oo way adag tahay in la helo nashqadeeyaha garaafka oo ay kujiraan qorista Comic Sans qaar ka mid ah mashaariicdooda, maahan oo keliya inaysan jeclayn, laakiin sidoo kale maxaa yeelay sanadaha qaarkood a Waan necbahay xirfaddan gudaheeda xagga noocan ah font, sidaa darteed xirfadlaha naqshadeeya ee adeegsada waxaa suuragal ah in su'aal la geliyo.
1 Laakiin maxaa farta noocaas ah loogu nacay?
2 Nooc font ah oo siiya ciyaar yar
Laakiin maxaa farta noocaas ah loogu nacay?
Waqtigan xaadirka ah waxaa jira dhaqdhaqaaq ka dhan ah qoraalkan oo loo yaqaan Ban Ban Sans, oo ay kala hogaaminayaan Dace iyo Holly Combs, laba naqshadeeye oo ujeeddadooda ugu weyni tahay inay isku dayaan inay "la qabsadaan" jahliga qoraalka, caasinimo iyo ka hor tag dhadhan xun.
Ficillada labada naqshadeeye waxay ku guuleysteen inay gaaraan Google lafteeda, yaa u sheegaya Waxay codsadeen in laga saaro muuqaalka muuqaalka Comic Sans ilaha laga heli karo marka la samaynayo emayl. Laakiin xaggee diidmadani ka timid?
Si aad u bilawdo, waa lagama maarmaan in wax yar laga ogaado taariikhdeeda waana inay tahay fanka Comic Sans waa nooc qoraal ah oo uu naqshadeeyay naqshadeeye garaafka shirkadda Microsoft. Windows 3.1.
Iskuxirka madadaalada ee barnaamijka la sheegay wuxuu u baahday font lagu waafajin karo astaamaheeda, iyo sidoo kale inuu ku dhow yahay, ku faraxsan yahay isla markaana marin u heli karo adeegsadayaashan. Si loo gaaro, Connare Waxaan u qaatay dhiirigelin ahaan qaabka caadiga ah ee majaajilada, taas oo dhalisay font leh taabasho yar oo aan caadi ahayn iyo mid carruurnimo, taas oo waxyar ka dib lagu daray Windows 95 font buugga.
Comic Sans waxaa loogu talagalay dadka isticmaala beddelaad ka duwan, ayaa ka farxad badan Times New Roman waxayna ahayd xilligaas oo qaab-gacmeedkan lagu guuleystay in la ogaado loona isticmaalo si joogto ah wax kasta. Waxay ku jirtaa wajigan ugu dambeeya, halkaas oo mania ay naqshadeeyayaasha u leeyihiin qaab-qoraalkan ay diiradda saaraan, tan iyo hoos u dhaca runti maahan font, laakiin isticmaalka xad-dhaafka ah ee khaldan ee ay isticmaaleyaashu siiyeen.
Isticmaalka Comic Sans si aad u sameyso warbixinno, bandhigyo xirfadeed, sii deyn, iyo kuwo kale, waxay si cad ugu saabsan tahay qalad aan la aqbali karin. Maaddaama aysan suurta gal ahayn in loo adeegsado nooc qoraal ah xusuus carruurnimada marka la qorayo qoraalo xirfadeed iyo mid culus oo aan lagu qorin buugaagta macluumaadka, dhacdooyinka tacsida leh, iyo kuwo kale.
Sansada majaajillada looma abuurin in lagu isticmaalo wax walba iyo in aan lagu daabicin wax warqad ah, taa bedelkeed, waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo isdhexgalka. Si kastaba ha noqotee iyo nasiib daro dad badan, maanta waa laga heli karaa meel kasta.
Nooc font ah oo siiya ciyaar yar
Iyadoo laga yaabo inay umuuqato a qaab qoraal fiican oo madadaalo lehWaa lagama maarmaan in laga warqabo goorta, sida iyo sababta loo adeegsanayo, si kastaba ha noqotee iyo sidaan horayba u soo sheegnay, diidmada guud ee soo gaadhay Comic Sans waa sida in dhammaan naqshadeeyayaasha asal ahaan way eryeen iyadii, sidaa darteed waa in aan loo isticmaalin xitaa in la abuuro casumaadaha xafladda dhalashada ama in la qoro farriimaha carruurta.
Xitaa waxaad ka heli kartaa internetka sawirro muujinaya qoraallada sida: “Markaad isticmaaleyso Comic Sans, naqshadeeye qaabeysan ayaa lumiya baalashiisa”. Laakiin inkasta oo xaqiiqda ah in maalin kasta kuwa wax dhaleeceeya ay ka badan yihiin, haddana waxaa jira dad gaar ah oo difaacaya ilahaas.
Si kastaba ha noqotee, way cadahay in diidmada iyo nacaybka ka jira ilahaani ay sii wadi doonaan inay sii kordhaan oo ay noqdaan kuwo lagu murmo. Tan iyo inkasta oo ay ku saabsan tahay ka saar marxaladda qorista, Comic Sans ayaa had iyo jeer noqon doona jilaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waa maxay sababta qoraalka Comic Sans sidaas loogu nacay?
Maxaa sidaa loogu nacay? Sababtoo ah, waayo? Sababtoo ah….
Ku jawaab Beatriz
Juan Carlos Paz Martinez sawirka dijo
Waxaan u maleynayaa in Comic Sans uu yahay nooc qurux badan, laakiin asal ahaan ka soo jeeda majaajiladaha, ma bixinayo dareen ah mid dhab ah, waxaana u maleynayaa inay taasi tahay sababta aan badanaa loo isticmaalin, illaa waxa jira mooyee sameeyey wax la xiriira wax qosol badan.
Jawaab Juan Carlos Paz Martinez
Raul Botero dijo
Runta ayaa aniga ila muuqata «bulling», waa u janjeera dadka aan xirfad lahayn. Dhammaanteen waan jecel nahay ilaha, laakiin sida qaar yar markii hore, waxay qaateen inay dhahaan waan necbahay, dadka madaxa la'aanta ah ayaa si fudud ugu biiray iyaga, bini aadamka way u fududahay ku biirista waxyaabo aan wax soo saar lahayn marka loo eego waxyaabaha wanaagsan. Waxay la mid tahay muusikada Arjona, marwalba waan jeclaa, hadda sidoo kale waxay u janjeeraa inay necbaan! Maxaa nagu dhacaya?
Jawaab Raúl Botero
majaajillada loo yaqaan 'majaajillada' ayaa loo neceb yahay shaqada ku siinaysa garaacista sanka hoosta
Ku jawaab sans
JOSELYN PATRICIA QUISPE GUILLEN dijo
Waxaan xasuustaa in macalinkaygii meesha aan wax ku barto uu iga mamnuucay oo uu ku sigtay inuu i ceyriyo isagoo isticmaalaya majaajillo san, mashruucayga. Daacadii, anigu uma arko wax qalad ah oo ku jira. Sida iska cad majaajillada sans uma adeegsan doonaan warqad dabool ah, laakiin maahan inaad aad u necbaato. Hadda waxaan baranayaa Naqshadeynta Naqshadeynta, in kasta oo nashqadeeyayaasha kale ay i neceb yihiin, haddana majaajillada sanku waa nooca aan doorbido ka hor qoryaha qalalan
Jawaab JOSSELYN PATRICIA QUISPE GUILLEN
Halkan waxaad noqon doontaa kan ugu horreeya ee iskudaya qaabka cusub ee Youtube!
Sida loo helo naqshad la daabaco adigoon ku dhiman isku dayga